Mumiriri Mutsva weNorton, VaMliswa Vanotoreswa Mhiko muParamende
Mumiriri mutsva weNorton, VaTemba Mliswa
Vakakunda musarudzo dzeNorton bye-election, VaTemba Mliswa vatoreswa mhiko yekuve nhengo yedare reparamende.
Nhengo dzedare reparamende kubva kumapato ose kusanganisira Zanu PF dzanga dziri mudare reparamende dzinonzi dzachingamidza VaMliswa zvine mutsindo dzichishevedzera kuti “bhuru, bhuru,” zita remadunhururirwa riri kushevedzwa naro VaMliswa mazuva ano.
“Haa, vanga vachifara, vanga vachifara. Vasheedzera kuti 'bhuru, bhuru,' vapembera kuti bhuru, bhuru. Vamwe vakati shumba yeZanu PF imomo. VeZanu PF vacho vanga vachifara tichiti aiwa, ngatishandeyi pamwechete,” VaMliswa vanodaro.
VaMliswa, avo vakakwikwidza vakazvimirira, vakawana mavhoti anoita zviuru zvisere nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemanomwe (8 927) vachiteverwa naVaRonald Chindedza veZanu PF avo vakawana mavhoti zviuru zvitanhatu nezana rine makumi mapfumbamwe nemaviri (6 192).
VaDavid Choga veNCA vakawana mavhoti makumi masere nemapfumbamwe (89).
Chigaro chemumiriri weNorton chakasara chisina munhu zvichitevera kudzingwa kwaVaChristopher Mutsvangwa kubva mubato reZanu PF.
VaMliswa vakadzingwawo mubato reZanu pF vachipomerwa mhosva dzakasiyanasiya, dzinosanganisira kutsigira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru.
VaMliswa vanoti vachashanda zvakasimba mukuona kuti vanhu vemudunhu reNorton vawana zvose zvavanoshuvra.
“Aiwa, masimba ose anonge achifanira kunge aneni ndaanawo iye zvino izvi. Ndinozvitenda chaizvo, veZEC vanonyora tsamba kuparamende vachitaurira paramende kuti iyi nhengo iyo ndiyo yave nhengo yeparamende, saka tsamba yacho yaverengwa. Saka Norton ngaichiziva kuti yaane mumiriri iye zvino izvi.”
VaMliswa vanoti vatotanga kuita basa reNorton, vatove mutumwa weNorton.
Vanotiwo vari kukorokotedzwa nevanhu vakawanda, vamwe vacho vachitowakumbira kuti vavamirire kumatunhu avo.